Oduu Simbirtuu ! Burjaajjiin sagantaa boordii filannoo keessaa jalqabe ammas itti fufuun galmeen filattootaa turtii gara ji’a tokkoof achi siiquun barame. | Kichuu
Posted on March 1, 2021 by kichuu_admin
Burjaajjiin sagantaa boordii filannoo keessaa jalqabe ammas itti fufuun galmeen filattootaa turtii gara ji’a tokkoof achi siiquun barame.
Kunis Guraandhala 22/2013 jalqabe kan jedhame Bitootessa 16/2013 akka tahu murteeffameera. Filannoonis hin jiraatu
Wabiin keenya MCBOti
Sisaay Ayyalee (Leencoo Baatii ) “Ameerikaan homaa hin fiddu” jedhee kaadiree Bilxiginnaa onnachiisuu yaale. Dhugaan jiru garuu akkasii miti. Ameerikaan xalayaa barreessitee, ibsa ejjannoo qofa baaftee dhiifti yoo itti fakkaate Obbo Sisaay dogoggoreera . Ameerikaan waan barbaade gochuuf humna qabdi. Kan kaadireen dhagahuu fi amanuu hin barbaanne tokko garuu Ameerikaan Ashaagiree aangoorraa fonqolchuu akka dandeessuudha . Waraana Ertiraa fi Faannoo Amaaaraa yakka duguuggaa sanyii raawwataa jiru Tigraay keessaa ariitiin yoo hin baasin tarkaanfiin Ameerikaan Ashaagiree irratti fudhattu laalessaa fi barsiisaa akka ta’u shakkiin hin jiru.
Waa’ee minilik kana beektuu laata?
Bara Lola #Aduwaa sodaatichi minilik farda lolaa utuu hintaane #Gaangee yaabbatee duuba waraanaa deeme! Aduwaatti erga waraanni baalchaa saafoo fi gabayyoo gurmuufaa Lola injifatanii farda yaabbatee achitti argame!
Waan inni gaangeef deemeef namni farda yaabbate lolaaf waan deemuuf akka nama imala Kan biraaf deemuutti achi deeme!
Minilik lafa ertiraa #laga_mareb jedhamu gamatti warri xaaliyaaniif waggaa 40 gurguratee gara aduwaa akka hindhufne ittiin jedhus xaaliyaan didee gamanas fudhachuu barbaade! Minilik sodaataa waan ta’eef lafa ertiraa gurgure!
Bulchitootni itoopiyaa faarsanii fi itti faarfataman warra dhugaatti biyya jaallatan utuu hintaane warra taayitaa fedhaniidha! Ammallee kunoo #sudaanitti lafa bal’aa dhiisanii Lola aduwaaf sirbu!
Minilikii fi nafxiin ammaa tokkuma! Minilik fi Abiyyiin tokkuma!
Galaana Gaaromsaa ayyaana Adawaa irraa dhorkame.
Sirni Abiyyiin hoogganamu sirna Alagaa ergamu tahuun Adawaa Gootota Oromootin dhufe Ormaa dabarsuufi yoo xaartu argina. Yaadattu taanan ji’a 5 dura #Galaanaa_Gaaroomsa #irreecha irraa dhoorke. Har’a deebisanii #Galaanaa_Gaaroomsaa sirna kabaja #ADAWAA irraa dhoorkame. Boru hoo maal nu dhoorkuf deemina laata.?
Abiyyi Ahimed Alii Muddamsuu guddoo keessa jira! – https://t.co/PBF91hJvj9 pic.twitter.com/EfvTpHDovr
— Kichuu (@kichuu24) March 1, 2021